वीरगन्जमा प्लाज्मा थेरापी विधिबाट कोरोना संक्रमितको उपचार सुरु « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
वीरगन्जमा प्लाज्मा थेरापी विधिबाट कोरोना संक्रमितको उपचार सुरु
२०७७, १५ भाद्र सोमबार १२:१६ मा प्रकाशित
नेपाल हेल्थ न्युज, वीरगन्ज । वीरगन्जमा प्लाज्मा थेरापी विधिबाट कोरोना संक्रमितको उपचार थालिएको छ । नारायणी अस्पततालमा उपचाररत रहेका सर्लाहीको चकरघट्टा गाउँपालिका ३ सुन्दरपुरका ३५ वर्षीय पुरुषको आइतबा राती प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार थालिएको उपचारमा संलग्न डा. उदयनाराण सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
आइसीयूमा भर्ना रहेका ती पुरुषको प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार थालिएसँगै उनको स्वास्थ्यमा सुधार पनि आइरहेको डाक्टर सिंहले बताउनुभयो । एक हप्तादेखि ज्वरो, खोकी र स्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि उनलाई गत शनिबार परिवारका सदस्यले वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा ल्याएर भर्ना गराएका थिए ।
आइतबार उनको स्वाब संकलन गरी पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । आइसीयुमा भर्ना गरिएका उनमा कोरोनाको गम्भीर किसिको लक्षण देखिएको र स्वास्थ्यमा सुधार पनि नभएपछि प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार थाल्ने निर्णयमा आफूहरु पुगेको डाक्टर सिंहको भनाई छ ।
यसका लागि कोरोनामुक्त भइसकेका नारायणी अस्पतालकै एक पूर्व कर्मचारीले आफ्नो रगत दिएको र त्यही रगतबाट प्लाज्मा निकालेर संक्रमित पुरुषको शरीरमा चढाइएको जानकारी डाक्टर सिंहले बताउनुभयो ।
आइतबार राती १२ बजेतिर ती संक्रमित पुरुषको प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गरिएको भन्दै डा. सिंहले भन्नुभयो -‘यो विधिबाट २ घण्टासम्म उपचार गरियो, त्यसपछि उनको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आइरहेको छ, यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ। उनमा यो विधि सफल भए नभएको अन्तिम नतिजाका लागि भने २४ घण्टा कुर्नुपर्छ ।’
प्रदेश नम्बर २ मा पहिलो पटक वीरगन्जमै प्लाज्मा थेरापी विधिबाट संक्रमितको उपचार गर्न थालिएको उनले बताए । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाबाहेक प्रदेश १ को धरान र प्रदेश ५ का बुटवलमा प्लाज्मा थेरापी विधिबाट संक्रमतिको उपचार गरिएको थियो ।
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा एक हप्ताका लागि स्थगन
भारतमा लगातार घट्दै कोभिड–१९ संक्रमित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । भारतमा लगातार चौथौ दिन कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएको छ ।